I-Yiwu Night Market ihlukile nge-Yiwu.iqoqa zonke izinhlobo zezinto ezishibhile ezingahlangabezana nazo zonke izidingo zakho zansuku zonke.
IZICI ZE-YIWU NIGHT MARKET
Umehluko phakathiIzimakethe zasebusuku zaseChinanezinye izimakethe ze-yiwu amahora ebhizinisi.Isikhathi sebhizinisi se-Yiwu night market sisuka ngo-6pm kuye ku-2 noma ngo-3am.Ukuthengisa kuyindlela eyinhloko yebhizinisi.Kunezinhlobonhlobo zezimpahla lapha futhi ngenxa yalokho kunezivakashi eziningi.
IPHI I-YIWU NIGHT MARKET?
I-Yiwu inezimakethe eziningi zasebusuku, phakathi kwazo zonke, imakethe yasebusuku yase-Bingwang inokugeleza okukhulu kwabantu.Iseduze ne-Internal Revenue Service ye-Santing rode.Kunezinsiza eziningi ezizungezile, okuhlanganisa i-yiwu ktv embalwa, ama-yiwu bar namahhotela e-yiwu.Uma uhlala ehhotela i-Yiwu Yindu, i-Yiwu international mansion noma ihhotela i-Yiwu Jindu, ungaya lapho ngezinyawo.
AMACEBISO OKUTHENGA WE-YIWU NIGHT MARKET
Abathengisi emakethe yasebusuku ye-Yiwu cishe bangosomabhizinisi abangenazo ilayisensi yebhizinisi elisemthethweni.Kunamakhophi amaningi anazo zonke izinhlobo zezimpawu zomkhiqizo lapha.Futhi ngokuqinisekile nawe ungakwazi ukuthenga izimpahla ofuna.
Uma uthenga emakethe yasebusuku ye-Yiwu, ungakholwa inani elinikezwa abathengisi.Kufanele uxoxisane nabo futhi imvamisa ingaba ngu-30% -50%.
Ukudla emakethe yasebusuku kumnandi kakhulu, wamukelekile ku-Yiwu